tsp fish sauce | Colourful Recipes
Chicken – Curry
Chicken – Salad
Chicken – Soup
Chicken – Stew
chicken – baked
Chicken – Fried
Pork – Curry
Pork – Salad
Pork – Soup
Pork – Baked
Pork – Fried
Pork – Stew
Pork – Steam
Duck – Curry
Duck – Roast
Beef – Curry
Beef – Grilled
Beef – Salad
Beef – Fried
Beef – Soup
Mutton – Curry
Lamb – Soup
Lamb – Baked
Fish – Curry
Fried – Fish
Prawn – Curry
Prawn – Salad
Prawn – Soup
Turkey – Curry
Turkey – Baked
Turkey – Steam
Turkey – Fried
Rice – Biryani
Rice – Pot Rice
Rice – Fried Rice
Rice – Salad Rice
Egg – Curry
Egg – Fried
Egg – Salad
Dried Fish Recipe
Paste – Shrimp Paste Recipe
Paste – Soy Bean Paste Recipe
Paste – Fish Paste Recipe
Paste – Fish Sauce Recipe
Rice Stick Noddle Recipe
Rice Vermicelli Recipe
Bean Vermicelli Recipe
Sour Soup Recipe
Fish – Fried
Cake & Cookie Recipe
Myanmar Traditional Foods
Price – Cooking Ingredients
Price – Kitchen Appliances
Price – Meat
Tag Archives: tsp fish sauce
Egg curry in coconut milk
Egg – 10 boiled and peeled ( make some slashes in it )
Peanut oil, for sauteing and deep frying
Red onion – 1 finely chopped
Ginger – 1 tbsp
Garlic –4cloves, finely chopped
Coriander leaves/ Cliantro – 1/4 cup finely chopped
Salt – 1 tsp, to taste
Sugar – 1 tsp
Fish sauce – 1 tbsp
Coconut milk – 1 can
Fillalarge sauce pan halfway with water and bring toaboil. Gently add the eggs. Cook for 30 minutes.
Allow the eggs to cool forafew minutes, then peel the eggs, make some slashes in it.
Heat peanut oil, fry the boiled eggs until golden brown.
Add the onion, garlic and ginger, and cook until golden brown.
Add chilli powder in it.
Add some salt, sugar and fish sauce and mix well. Cook this foraminute.
Pour 1 can coconut milk and water bring this toaboil.
Add in fried cooked eggs, then cover and simmer for 15 minutes.
Gently stir inagenerous handful of coriander leaves. Be mindful of the eggs.
ကြက်ဥပြုတ် ( ၁၀ ) လုံး .. ကြက်ဥပြုတ် ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို ဓါးဖြင့် ရာပေးထားပါ။
ပဲဆီ – ကြက်ဥပြုတ် ကြော်ဖို့အတွက် နှင့် ဟင်းအနှစ်ဖတ်များ ဆီသတ်ကြော်ဖို့ ပဲဆီ ခွက် တ၀က် သာသာ
ကြက်သွန်နီ ဥကြီး တစ်လုံးကို ကြိတ်စက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ငရုတ်ဆုံဖြင့် ထောင်းထားပါ။
ဂျင်း – လက်တဆစ် ( တစ်လက်မ )
ကြက်သွန်ဖြူ – ၄ မွှာ ကို ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်းတို့နှင့် အတူ ထောင်းထား ( ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ထားပါ )
နံနံပင် – လက်တစ်ဆုပ်စာ
ငရုတ်သီးမှုန့် – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ဆား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
သကြား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငံပြာရည် – ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
အုန်းနို့ – သံဗူး ၁ ဗူး
ရေ – ခွက် တ၀က်
ကြက်ဥ ( ၁၀ ) လုံးကို အိုးထဲမှာ ရေ တ၀က်ဖြည့်ပြီး မိနစ် ၃၀ ကျော်လောက် ကျက်နေအောင် ပြုတ်ထားပါ။
ရလာသော ကြက်ဥပြုတ်များကို အအေးခံပြီး အခွံခွါထားပါ။ ( ကြက်ဥပြုတ် အခွံခွါရ လွယ်အောင် ကြက်ဥပြုတ်သည့်အချိန်မှာ ဆား အနည်းငယ် ထည့်ပြီး ပြုတ်လို့လည်း ရပါသည်။ ) အခွံခွါပီးသား ကြက်ဥပြုတ်များကို ဘေး ပတ်ပတ်လည်မှာ ဓါးရာ ပေးထားပါ။
ပဲဆီကို မီးအပူပေးပြီး ကြက်ဥပြုတ်များကို ရွှေအိုရောင် ရသည့်အထိ ကြော်ပါ။
ကြော်ပြီး ကြက်ဥပြုတ်များကို ဆယ်ထားပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း ထည့် ဆီသတ်ကြော်ပါ။
ရွှေအိုရောင် ရသည့်အထိ ဆီသတ်ကြော်ပြီးပါက ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်ရောကြော်ပါ။
ဆား၊ သကြား၊ ငံပြာရည် ထည့်ရောကြော်ပါ။ မိနစ် အနည်းငယ်လောက် မွှေပေးထားပါ။
အုန်းနို့ သံဗူး ၁ ဗူး ထည့်၊ ရေ ခွက် တ၀က်လောက် ထည့်ပါ။ မိနစ် အနည်းငယ်လောက်မှ ပွက်ပွက်ဆူလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ အခါမှာ ရွှေအိုရောင် ကြက်ဥပြုတ်ကြော်များကို ထည့်ပီး မွှေပါ။ အုန်းနို့နှင့် ကြက်ဥများ အနှစ်ဖတ်များ နှံစပ်နေအောင် မွှေပြီးမှ အဖုံးအုပ်ပီး ၁၅ မိနစ် ကျော်လောက် မီးမြေးမြေး ဖြင့် ချက်ပါ။ ဆီပြန်လာခါနီး အချိန်မှာ မီးကို နံပါတ် ၂ လောက်အထိ လျှော့ချပြီး မီး ခပ်မြေးမြေးလေးဖြင့် ကြက်ဥ ဓါးပေါက်ရာများ အတွင်း အုန်းနို့နှင့် အနှစ်များ ၀င်အောင် ချက်ပါက ပိုစားကောင်းပါသည်။
နံနံပင် လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ကို ပါးပါးလှီးပီး ထည့်ပါ။
အုန်းနို့ အနှစ်များများဖြင့် စားလို့ကောင်းသော ကြက်ဥဆီပြန်ဟင်း
မီး ခပ်မြေးမြေးဖြင့်ဆီပြန်နေအောင် ချက်လိုက်တော့ ဒီလိုမျိုး အုန်းနို့ ဝေ့နေတဲ့ ပုံစံ မျိုး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အခါ အိုး ကိုင်း ၂ ဖက်ကို ကိုင်ပီး အိုးလှုပ်ပေးလိုက်ရင် …
အုန်းနို့စိမ့်စိမ့် ကြက်ဥ ဆီပြန်ဟင်းအိုး အရောင်လှသွားပါပြီ။
By Thet Nandar • Posted in Egg - Curry, Egg Recipe	• Tagged ကြက်ဥ အုန်းနို့ဆီပြန်ဟင်း, ကြက်ဥဆီပြန်ဟင်း, cooked eggs, dinner, egg curry, egg curry in coconut milk, food, generous handful, tsp fish sauce
Coffee April 24, 2016
✿*´¨)* ¸.•*¸.• ✿´¨).• ✿¨) (¸.•´*(¸.•´*(.✿ Good Morning! 💜 Coffee is on, grabacup! ☕ It’s going to beafabulous day full of Awesome sauce! Good Coffee isapleasure. Live for the moment, live for today. Be good to yourself, you deserve it! Advertisements
Thet Nandar ( Myanmar Unicode )
illustrations April 30, 2016
သူလိုခငျြတဲ့ ပုံစံ ရဖို့ ငါးစာခကြှေးတာနျော။ အိမျက ကလေးတှကေို ကြောငျးမှာ သခြာင်ျ သငျတဲ့ စနဈက common core ပါ။ အဲဒါ classic – သခြာင်ျ တှကျနညျးစတိုငျပါ။ အဖွေ ကို တိုကျရိုကျ မထှကျဘူး။ ဒဲ့ ကွီး အဖွေ ကို မထှကျဘူး။ သှယျဝိုကျပီး အဖွေ ထှကျတာပါ။ အဲဒါကို ဒီကနေ့ City မွို့ ပျေါမှာ နထေိုငျသော လူမြား နှငျ့ အခြိနျကို လုပီး သုံးနရေသော လူ့ အသိုငျးအဝိုငျးမှာ အဲဒီ ရှေးဆနျသော […]
Thet Nandar ( Myanmar )
တုံ့ပြန်မှု April 30, 2016
noreply@blogger.com (Thet Nandar)
Thet Nandar Family ( Thiriyatanar )
Ancestors Altar September 10, 2018
Praise The Ancestors! Praise to my Ancestors! My Father My mother I give praise to my ancestors. I give praise to my guardian angels. I give praise to the universe. I give praise to Mother Earth. I give praise to all of nature and its beings. I give praise to all my guiding spirits. I give praise to all that came before me in this […]
Buns & Rose
Shrimp and mushroom curry
ကန်စွန်းဥ ရွှေချီ ဆနွင်းမကင်း၊ ကန်စွန်းဥ အုန်းနို့ သာကူ
● ☆● Cheese Cake ●☆●
ရခိုင်မုန့်တီ ( အာပူ လျှာပူ )၊ အစုံသုပ်၊ ဗယာကြော်
Cream puff ( အီကလဲယားမုန့် )
Young Tamarind leaf Salad
Easter Ham & Fried Noddles
၀က် — ပြောင်းဖူး ချိုချဉ်ကြော်
Strawberry Pattern Swiss Roll
Roast Lamb Leg
အမဲသားကြော်၊ ငပိရည်နှင့် တညင်းသီးပြုတ်
Angel Pattern Swiss Roll
ကြာဇံဆီချက် ( မုန်ညှင်းချဉ် )
Beef with Lime, Garlic and Chili Sauce
Categories Select Category Bean Vermicelli Recipe Beef – Curry Beef – Fried Beef – Grilled Beef – Salad Beef Recipe Bread Cake Cake & Cookie Recipe chicken – baked Chicken – Curry Chicken – Fried Chicken – Salad Chicken – Soup Chicken – Stew Chicken Recipe Cookie Cooking experience Cooking Ingredients Crab Cream Puffs Donut Dried Fish Recipe Duck – Curry Duck – Roast Duck Recipe Egg – Curry Egg – Fried Egg – Salad Egg Recipe Fish – Curry Fish – Fried Fish Recipe Food & Drink Fowl Recipe Fried – Fish Fried Recipe Fruit Grocery Ham Recipe Healthy food Hen Recipe Indian Grocery Jelly Juice Kitchen Appliances Lamb – Baked Lamb – Roast Lamb – Soup Lamb Recipe Lunch Box Milk Shake Muffin Mutton – Curry Mutton – Fried Mutton Recipe Myanmar Traditional Foods Noddle Recipe Pasta Recipe Paste – Fish Paste Recipe Paste – Fish Sauce Recipe Paste – Shrimp Paste Recipe Paste – Shrimp Sauce Recipe Paste – Soy Bean Paste Recipe Paste Recipes Pork – Baked Pork – Curry Pork – Fried Pork – Salad Pork – Soup Pork – Steam Pork – Stew Pork Recipe Prawn – Curry Prawn – Salad Prawn – Soup Prawn Recipe Price – Cooking Ingredients Price – Kitchen Appliances Price – Meat Prices Pudding Recipes Rice – Biryani Rice – Fried Rice Rice – Pot Rice Rice – Salad Rice Rice Recipe Rice Stick Noddle Recipe Rice Vermicelli Recipe Salad Recipe Sour Soup Recipe Spicy Steam Recipe Swiss Roll Thiriyatanar’s Special Traditional Foods Turkey – Baked Turkey – Curry Turkey – Fried Turkey – Steam Turkey Recipe Uncategorized Vegetable Recipe Vietnam Grocery
Kyaw Htun on ၀က်သား အငံ စွန်တန်ဟင်းရည်
sawthanlwin on အီကြာကွေး
အစ်မ ရေ ရွှေချီနဲ့ ဘိ… on Shwe Chi
Naga on ပဲကြော်
Naga on ရခိုင်မုန့်တီ ( အာပူ လျှာပူ )၊…
Naga on Cheese cake
Naga on အီကြာကွေး
Naga on ကြာဇံချက်
Naga on ကန်စွန်းဥ ရွှေချီ ဆနွင်းမကင်း၊…
ဆန် နှင့် ကောက်ညှင်းဆန်
U.S.A. Flags, Since 04/05/16